wake up madagascar: hanatontosa fifidianana malalaka | mandimby maharo
wake up madagascar: hanatontosa fifidianana malalaka
Posted on 19 July 2013 22 July 2013 by Mandimby Maharo
Nankalaza ny international mandela day, ny 18 jolay, izay andro natokan’ny firenena mikambana ho fahatsiarovana an’i Nelson Mandela ny Wake up Madagascar. Tetsy amin’ny tahala Rarihasina no nanatanterahana izany. Fotoana nentiny nanentanana ny olom-pirenena handray andraikitra sy hiaro ny zo fototry ny tsirairay toy ity rain’ny fanafoanana ny fanavakavaham-bolokoditry ny afrikana atsimo ity io.
Ankoatry ny fampirantina ireo sarin’ny olompirenena dia nisy koa ny fanentanana nataon’ireo mpanan-talenta amin’ny hira, tononkalo sy kanto hafa. Fa nampiavaka ity hetsika ity koa ny nafahan’ireo rehetra manana hetaheta nanoratra izany teo amin’ny rindrin’ny olom-pirenena. Na ny zaza na lehibe dia samy naneho hevitra malalaka avokoa.
Hetsika faharoa nivoaka ny tambajotra saosialy nahaterahany iny nataon’ny Wake up Madagascar iny. Ny 24 jolay ho avy izao ny manaraka. FIFIDIANANA amin’ny endriny hafa io. Hisy ny vata mangarahara handrotsahan’ny tsirairay ny hetahetany eo ka ho tanterina any amin’izay mifanandrify azy izany avy eo. “Satria tsy avela hifidy isika” no lohahevitra amin’io. MANAINGA NY OLOM-PIRENENA REHETRA ARY.
Tags: 24 juillet 2013, fifidianana, Wake up MadagascarCategories: Uncategorized Aside